musha UNITED STATES BioGRAPHY STORies US Media Hunhu Julia Rose Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheJulia Rose Childhood Nhau, Biography Chokwadi, Hupenyu Hwemhuri, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Mararamiro, Vakomana Vemukomana, uye ruzivo rweMunhu wega. Zvikuru, zvimwe zviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake mazuva kusvika pakuzivikanwa kwake.
Hupenyu nekusimuka kwaJulia Rose. ?: IG & FB
Ehe, iwe ungangodaro iwe unoziva nezvenyaya dzinosimudzira dzekushambadzira dzaJulia mukusimudzira yake yemagazini yedigital. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveJia Rose's biography, iyo inoshamisa. Zvino, pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Julia Rose Nyaya Yemwana:
Kutanga, Julia Rose akazvarwa pazuva rechimakumi matatu raDecember 30 mudunhu reTexas kuUSA. Iye ari mumwe pakati pevashoma pane vana vaviri vanozvarwa nevabereki vane hunhu hwavo huchiripo pasirese yepasi rose.
Texas inzvimbo iyo Julia nemhuri yake vanodana kumusha kune zvikonzero zvakawanda. Chimwe chikonzero ndechekuti Julia akakurira kuLone Star State padiki neimwe hanzvadzi diki inozivikanwa.
Julia Rose ndeye Texan nekuzvarwa uye kukura. ?: WorldAtlas & IG.
Julia Rose Makore Ekutanga:
Kukura muThe Lone Star State, Julia aive mwana aifara uyo aive nehupenyu hwekutanga zvido mukuenzanisa. Muchokwadi, akadzidza nzira yekutanga kutumira pamberi pemakamera kubva pazera diki uye aigona kutora mifananidzo chero mumhuri yemhuri.
Tichifunga nezvaunoona pazasi, iwe unobvumirana nesu kuti makore ahuduku hwaJulia Rose aibata kumeso.
Mufananidzo wehudiki wemufaro Julia Rose uyo unoratidza rudo rwake rwekumira pamberi pemakamera adzokere kumashure. ?: Instagram.
Julia Rose Mhuri nhoroondo:
Kunyangwe pasina ruzivo nezve vabereki vaJulia Rose, hapana kuramba nyaya yekuti vaive vakagwinya vanhu vakakwirisa Julia mune yepakati yemhuri yepasi kurongedza mamiriro.
Nekuda kwemabatirwo amakaitwa nababa naamai vaJulia, ane nyaya yekufara mwana achiri mudiki inotaura nyaya dzemusikana mudiki aivimba uye angaita chero chinhu kuzadzisa zviroto zvake.
Julia Rose akazvarwa kuvabereki vasingazivikanwe senge muna Kubvumbi 2020:?: ClipArtStudio.
Julia Rose Dzidzo uye Basa Rokuvaka:
Wakanga uchiziva here kuti Julia mudzidzi wepakoreji? Aive nedzidzo yake yechikoro chesekondari kuHurumende yeTexas (kirasi ya2012) uye akaenderera mberi nekuenderera mberi nedzidzo yake kuYunivhesiti yeTexas inozivikanwa.
Julia achiri kuchikoro chesekondari uye kukoreji, haana kutadza kuona nezvezvaanofarira mukuita modelling. Muchokwadi, mamwe emifananidzo yekare yekuenzanisira iyo iripo pane peji raJulia's Instagram peji rinodzoka kumazuva ake ekukoreji.
Uyu mufananidzo wekuenzanisira wakatorwa mukati memazuva ake ekoreji. ?: Instagram.
Upenyu hwaJulia Rose hwepakutanga Hupenyu:
Paakapedza kudzidza kukoreji, Julia akatora mugwagwa wakakura worusununguko sevadiki vezera rake. Chikamu chekuzvimiririra chaireva kuti aifanira kuwana chekurarama nacho kuti awane mari yekutsvaga kuchiva kwake.
Kuti zviitike, Julia aida chinzvimbo akashanda mabasa akati wandei anosanganisira kuve bartender kuHoters. Akaenderera mberi achishandira kumabhawa mune dzimwe nzvimbo shoma dzinosanganisira Los Angeles uye Austin.
Kushanda mumabhawa anosanganisira Hooter yaive imwe yebasa rake rekutanga kuita. ?: Heavy.
Julia Rose's Biography - Road To Fame Nyaya:
Kuchinja kwebasa raJulia mukumodhiza kwakauya muna 2016 paakakandirwa padivi neboka revakadzi vakanaka uye magents mumwaka wechina wemitambo yekufambidzana yeMTV yainzi "Ndiwe here?"
"Ndiwe here?" chiitiko chechokwadi tv chinoratidza uko varume gumi nevakadzi vanokwikwidza kuwana vakwikwidza. Kunyangwe Julia akatadza kuwana iye mutambo wake wakanaka, aifara murudo nemurume uyu - Stephen McHugh - aifunga kuti ndiye mutambo wake.
Julia Rose's Biography - Rise To Mukurumbira Nyaya:
Tumira chaicho showa yekuedza akaona Julia akatanga yemadhijitari magazini inozivikanwa seShagmag. Iyo inopa isina kuchekwa mifananidzo yeakawanda Instagram mamodheru kune vakabhadhara kunyoresa. Shagmag aive bhizinesi aine tarisiro huru, uye Julia aive achida kuita chero chinhu kuchisimudzira.
Julia munguva pfupi yakawana mukana wekusimudzira mag kuti asvike vanyoreri vanyorese muna Gumiguru 2019 paakapfeka hembe yakasarudzika yemag ake kuna Game 5 ye2019 MLB World Series pakati peWashington Nationals naHouston Astros.
Maitiro aJulia Rose anozivikanwa:
Munguva ye7 yekutanga yemutambo, Julia neshamwari yake yemhando Lauren Summer vakatora mashati avo kumusoro kuratidza pachena zvipfuva kuna Astros pitcher - Gerrit Cole. Vakabva vabviswa kunze kwegomba nekuchengeteka.
Panguva imwecheteyo, Mutevedzeri weMutungamiriri weDziviriro uye baseball Mashandiro paMajor League baseball, David Thomas, akatumira Julia uye tsamba dzechirimo achivazivisa nezvekurambidzwa kwehupenyu kubva kuzviitiko zveMLB zvemunguva yemberi.
Ona kuti ndiani akaenda hutachiona mushure mekunge iye neshamwari yake Summers vatora mahembe avo kumutambo weMLB. ?: KTXS.
Panguva yekurova Julia Rose Biography, iye neshamwari yake Chirimo vakanga vaenda kuhutachiona nekuda kwekusaita kwavo. Ruzha urwu rwatungamira magazini yavo kuwana manyorerwo akawanda. Vamwe vese, sekutaura kwedu, inhoroondo.
Julia Rose Upenyu Hupenyu - Mukomana, murume, Kid (s)?:
Rangarira takataura nezvemumwe mukomana - Stephen McHugh uyo Julia akadanana naye panguva yekuonekwa kwake pa "Iwe Ndiwe here?" Vaive vaviri vakadanana panguva uye mushure mechiratidziro. Muchokwadi, maRightbirds aive neYouTube chiteshi chinonzi Jules & Stephen John.
Julia Rose naStephen McHugh. ?: Hollywooddaddy.
Hukama hwavo hauna kumbobvira hwarova pasina nguva sezvo vaingogara vachiita zvekupaza kufambidzana kwavo kunyange mushure mekubatana muna Kurume 2019.
Achienderera mberi, Julia akange aine rudo rwepfungwa neyeMicrosoft nyeredzi Jake Paul kubva muna 2019 kusvika 2020. Vakarambana mukutanga kwaApril 2020, uye kwete zvakawanda zvakanzwika nezvehukama hwaJulia kubva panguva iyi.
Jake Paul naJulia vaive chinhu kusvika Kubvumbi 2020.?: Youtube.
Julia Rose Hupenyu hwemhuri:
Mhando dzakanaka senge dzinobva kumhuri dzine rudo dzaisambomira kuvatsigira. Muchikamu chino, tinokuunzira chokwadi pamusoro pevabereki vaJulia Rose uye nevamwe vese vemhuri yake.
Nezve baba vaJulia naRose naamai:
Julia akakosha pakuchengeta zvinhu zvisina basa neupenyu hwake uye kutevedzera bhizinesi risasvike paruzhinji. Saka nekudaro, nyika ichiri kuziva nezvevabereki vane hanya yaive shure kwezvakaitika zvemunyaya wake nyaya yekufara.
About Vanababa vaJulia Rose uye hama:
Muenzaniso uyu une hanzvadzi yaakaita kuti ivandudze pasi nezve zvakaburitswa makore mazhinji apfuura mune post Instagram. Nekukurumidza kumberi kwenguva yekuisa biia yaJulia Rose, paisave nekuvandudzwa nezve hanzvadzi kubva kuna Julia.
Mufananidzo wakanaka waJulia Rose nemunin'ina wake. ?: Instagram.
Saizvozvo, madzitateguru emuenzaniso uye midzi yemhuri hainyatso kuzivikanwa, kunyanya maererano nezvevabereki vake nasekuru nasekuru. Zvakare, hapana marekodhi evana babamunini vaJulia na babamunini apo vazukuru vake, mwana wemunun'una, uye nababamunini vachiri kuzivikanwa.
Hupenyu hwaJulia Rose:
Julia Rose haana kumbosiyana neizvo iwe zvaunofanirwa kunge waverenga pamusoro pake - pamawebhusaiti ane mukurumbira ChildhoodBiography - kana anoonekwa mumavhidhiyo ake. Iye anoramba ari munhu anogara akavimba nemweya wakasununguka. Chii zvakare, iye anoshanda, akangwara, uye anonakidza-anofarira vanhu vazhinji vanozvarwa pasi peCapricorn zodiac chiratidzo.
Kana Julia asiri kushanda mukuenzanisa, anogona kuwanikwa achiita zvido zvishoma uye zvekuzevha zvinosanganisira kushambira, kuona, kutamba gorofu, kuenderana nemitambo yeBasketball uye basketball pamwe nekushandisa nguva yakanaka nemhuri uye neshamwari.
Kutamba gorofu ndechimwe chezvaanofarira kuita. ?: Facebook.
Iyo yakanaka yakanaka inopinda inofarirwa naMorgan Freeman, Justin Timberlake uyo anodawo gorofu.
Julia Rose Net yakakosha:
Wakanga uchiziva here kuti panguva yekunyora biia yaJulia Rose, mambure ake aikosha kupfuura mazana matatu emadhora? Kwokutanga kunobva mari yaJulia kunobva kubasa rake rekuenzanisira, kushambadza, uye kutsigira.
Kurarama kwaJulia Rose:
Iye zvakare anowana mari yakawanda kubva ku youtube chiteshi yake yakanzi 'SHAGAMG.' Saka nekudaro, hazvishamise kumuona achikwidza mumotokari dzekunze uye zvinoshanduka. Uye hapana mibvunzo pamusoro pekukosha kudhura kweimba yaanogara mairi kuLos Angeles, California.
Iye akakosha kudarika $ 300,000. ?: Photofunia & Zuva.
Julia Rose Chokwadi:
Kuputira yedu Julia Rose yehucheche nyaya uye biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvemuenzaniso.
Chokwadi # 1 - Imbwa Inodanana:
Julia yakakura pane imbwa. Iye ave ane risingawanzo kubereka akanaka imbwa kwemakore. Zviri raiti kutaura kuti pet ndiyo yemuenzaniso weyawo nekuti kazhinji inowoneka pane peji raJulia. Kungofanana nevarume vakuru nembwa- iyo inofarira; Ariana Grande uye Miley Cyrus, zvakawoma kusaona kemikari iri pakati pavo.
Akamboti hapana munhu aigona kumuda sezvinoita imbwa yake. ?: Instagram.
Fact # 2 - Sports Illustrated (SI) Swimsuit mhando:
Havasi vazhinji vanoziva kuti Julia Rose akakandwa seSI swimsuit modhi muna 2018. Kunyangwe iye asina kuzviita kune vatanhatu vekupedzisira, kuratidzwa kwenyika iyo yaakawana kubva pakuratidzira kwakamupa nhoroondo yenhau yenhau yakawedzera kukurudzira.
Chokwadi # 3 - Iyo Julia Rose Kuvhiringidzika:
Yedu chaiyo mbiri haisiyo chete inozivikanwa Julia paInternet. Muchokwadi, kutsvaga kuri nyore kweGoogle pa 'Julia Rose Biography'kana kubvunza kweWikipedia kunogona kukupa ruzivo nezveumwe mutambi akangozvarwa muLusaka, Zambia. Akanyatsosiyana kubva kuna Julia Jones (modhi) uyo watakanyorera iyi biography ye.
Vagadziri vedu vakatora nguva yekupeta nekuratidza ruzivo rwechokwadi nezvemuenzaniso anonzi Julia Rose kwete mutambi (ona pazasi) kubva kuLusaka, Zambia.
Tarira iye mutambi uyo pfungwa zhinji dzaive dzakafanana nemuenzaniso. ?: Rondedzero.
Chokwadi # 4 - Kurambidza kubva kunzvimbo dzeveruzhinji:
Kusiyana nevamwe vezvenhau hunhu se Khloé Kardashian, Julia anofanira kutora n * u * d * ty kune imwe nhanho. Kuva nechinangwa chekusimudzira nu * d ** ty munzvimbo dzeveruzhinji zvakamuita kuti asasununguke kuenda kunzvimbo dzinoverengeka dzenzvimbo, kunyanya uko kune vana vakawanda. Kurambidzwa kwacho kunogona kusashanda kana Julia ari wehunhu hwake hwakanaka kwenguva yakareba.
Tinokutendai nekuverenga nyaya yedu pane yemuenzaniso uye kutenda mairi Zvatiri uye Zvatinoita. Vagadziri vedu vakatarisira kurongeka uye kurongeka uku vachiisa izvi zvirimo paJulia Rose Childhood Nhau uye Biography.
Nomutsa isa zvimiro zvako kana kuti tibvunze kana ukaona chimwe chinhu chisinga tarise mune ino chinyorwa nezvaJulia. Chekupedzisira, tagadzirira tafura yedu yaJulia Rose Wiki, iyo ichakubatsira iwe nekukurumidza uye nepfupi ruzivo nezve iye.
Zita rizere Julia Rose
Bhavhdhe 30th December 1993
mudiwa Stephen McHugh naJake Paul (Exes)
dzidzo University of Texas
Inokosha kukosha $300,000
urefu 5 tsoka 10 inches
Inodiwa pet imbwa
zvinhu Kushambira, kuona uye gorofu.